(tonga teto avy amin'ny Lalàna am-bava)
Ny Torah am-bava, izay atao amin'ny teny hebreo hoe תורה שבעל פה / Torah SheBe'al Pe, dia teny anondroana ny hevitry ny foto-pampianarana sy ny tahirin-dahatsoratra momba izany izay ampitaina am-bava ao amin'ny fivavahana jiosy, sady fanampin'ny Torah voasoratra (Lalàna voasoratra) sady tsy afa-misaraka aminy sady efa niaraka aminy hatramin'ny nanambaran'Adriamanitra azy tany amboalohany. Ahitana lovantsofina am-bava ny ao amin'ny boky jiosy maro, na kanonika izany na tsia, nefa ny farisianisma izay nialoha ny jodaisma rabinika no miavaka noho izy manamafy fa mampita ny lovantsofina tsy amin'ny alalan'ny soratra fa am-bava.
Ny Torah am-bava dia tokony tsy hivaona amin'ny endriny tamin'ny nanolorana azy tany Sinay (na Sinaia), ka noho izany dia mila mpamerimberina (hebreo: תנאים / Tannaim) izay mampita ny fampianarana izay mamerina ny teny nampitana azy hatramin'ny voalohany, nefa mivoatra ihany koa ny fivoasana azy izay tokony hifanaraka amin'ny zava-misy isan-taranaka. Noho izany dia manana heviny tsy efa isaina, izay samy nampitain'Andriamanitra amin'i Mosesy (na Môizy), ny Torah voasoratra, nefa ny vitsy amin'ireo ihany no nambara tamin'ny olombelona.
Am-bava tokoa io lovantsofina io tamboalohany, nefa taty aoriana dia nampandrina an-tsoratra amin'ny ampahany izy ireo tamin'ny taonjato voalohany ao amin'ny Midrasa (hebreo: מִדְרָשׁ / Midrash) sy ny Misna (hebreo: משנה / Mishna) ary ao amin'ny Talmoda (hebreo: תַּלְמוּד / Talmud) sy ny Fifamaliana (hebreo: שאלות ותשובות / She'elot uTeshuvot) ary ny asa soratry ny Raby taty aoriana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Torah_am-bava&oldid=960965"
Voaova farany tamin'ny 30 Desambra 2018 amin'ny 16:14 ity pejy ity.